फेवाताल नै सुक्न सक्ने चेतावनी !
ताल सिरानको सिमसार क्षेत्रमा धमाधम प्लटिङ
पोखरा, २९ जेठ । फेवाताल सिरानको सिमसारमा सुरु भएको प्लटिङले ताल नै जोखिममा पर्न सक्ने देखिएको छ । संरक्षणकर्मीले तालको बाँच्ने आधार योसँग जोडिएको सिमसार क्षेत्र भएकाले उक्त प्लटिङले ताल नै मासिन सक्ने चेतावनी दिएको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा लेखिएको छ ।
संरक्षणकर्मी डा. तीर्थबहादुर श्रेष्ठले भने, ‘तालको आयु सिमसारसँग जोडिने हुँदा सिमसार जोगाउनुपर्छ । सिमसार नरहे ताल पनि नरहन सक्छ ।’
तालसँग जोडिएको सिमखेतलाई घडेरी बनाएर बेच्न ठिक्क पारिएको छ । सर्वसाधारणका आँखामा ताल भनेको पानी भरिएको ठाउँ मात्रै हो । तर, ताल बाँच्ने अर्थात् त्यसरी पानी अडिने आधार भनेको वरिपरिको दलदल अर्थात् सिमसार क्षेत्र हो भन्छन् विज्ञ ।
फेवाताललाई रामसार सूचीमा दर्ता गरिसकिएको छ । त्यसैले यो विश्वकै सम्पदा बनेको छ । तर, यो सम्पदा जोगाउनेभन्दा मास्ने काम धेरै भएको छ । त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो– तालको सिमसार क्षेत्रमा सुरु भएको प्लटिङ । यसै पनि तालको पूर्वपट्टिबाट पोखरा सहरकै ढल लगेर मिसाउँदा दुर्गन्धित भएकै थिया े।
पानीको मुख्य स्रोत हर्पन खोलामा बर्सेनि आउने बाढीले बगाएर ल्याउने माटोले पनि ताल पुरेकै थियो । त्यसमाथि यसको सिमसारलाई सुक्खा बनाएर तालमाथि अर्को आक्रमण गरिएको छ ।
फेवातालको सिम क्षेत्रमा जग्गा किनबेच बढेको पोखरा उपमहानगरपालिका–२६ का सचिव रुद्रप्रसाद बास्ताकोटीले बताए । ‘जग्गा सम्याउन, घरबाटो, चार किल्लाका लागि बढी सिफारिस लिन बढी आउने गरेका छन्,’ उनले भने ।
प्लटिङ पोखरा उपमहानगरपालिकाबाट स्वीकृत नभएको अधिकारीहरू बताउँछन् । नगरपालिकाका इन्जिनियर सुरेन्द्र पौडेलले स्वीकृति नदिइएको सुनाए ।
​प्रम ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा आठ भन्दा बढि सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने